🥇 ▷ Redmi wuxuu diyaarin lahaa taleefankiisii ​​ugu horreeyay 5G, laakiin dhibaato ayuu qabaa ✅
Redmi wuxuu diyaarin lahaa taleefankiisii ​​ugu horreeyay 5G, laakiin dhibaato ayuu qabaa
5G waa isbeddelka ugu dambeeya ee dhammaan soo-saareyaashu rabaan inay ku biiraan sida ugu dhaqsaha badan. Noocyo badan oo badan ayaa soo bandhigaya moodallo cusub oo leh astaantan, sida Xiaomi, Samsung ama LG, oo iyagu ahaa kuwii ugu horreeyay ee adduunka oo dhan sidaas sameeya. Dhibaatadu waxay tahay mooddo badan oo soo ifbaxaya, xilligan la joogo qayb yar ayaa qaybinta shabakadan. Adiga oo aan sii socon, gudaha Spain kaliya waad ku raaxeysan kartaa 15 magaalo. Sida muuqata, Summada xigta ee lagu bilaabayo Terminaal leh astaamahani waa Redmi, laakiin leh dhibaato daran.
Horumar kasta oo ku saabsan isku xirnaanta internetka ee aan ku leennahay taleefannadeena, isticmaalka horusocodku wuu ka sarreeyaa kan kii ka horreeyay. Taasi waa, 5G waxay isticmaashaa tamar ka badan 4G taas oo iyaduna ka dambaysa qaadata wax ka badan 3G. Tani waxay keenaysaa in baytariyada laga hirgaliyo taleefannada maanta laga yaabo inaysan ku filnayn inay joogteeyaan madax-bannaanida wanaagsan, Maxay Redmi su’aal ugu keentay bulshada Si aad u ogaatid waxyaabaha aad doorbidayso.
Mobilada Redmi 5G: batari badan ama miisaan yar?
Waqtigan xaadirka ah, noocyo kala duwan ayaa ka faa’iideysanaya hirgelinta 5G si loo kordhiyo awoodda bateriyada taleefannadooda. Kororka bateriga wuxuu sababaa koror culeyska marinka su’aasha. Tusaale ahaan, Samsung Galaxy S10 5G wuxuu leeyahay culeys 198 garaam, halka Xiaomi Mi MIX 3 5G wuxuu gaarayaa 225 garaam oo culeys ah. Waqtigan xaadirka ah Redmi ma uusan xaqiijinin inay ku shaqeyneyso taleefanka 5G, laakiin daabacaadda soo socota ee Agaasimaheeda ayaa muujineysa inay ku shaqeynayaan.
Lu Weibing ayaa farriin u dirtay Weibo oo dhahaysa markii 5G ay soo socdaan, in taleefannadu ka sii culus yihiin kana culus yihiin sababta oo ah batteriga gudaha ku soo kordha. Ujeedkaas, Weydii isticmaaleyaasha waxa ay doorbidaan: batari badan ama miisaan yar iyo dhumuc weyn? Redmi waxaa laga yaabaa inay rabto inay ogaato fikradaha isticmaaleyaasha arrintan la xiriira, maxaa yeelay haddii dadku doorbidaan taleefano nal ah oo aad u rogan inkastoo ay luminayaan madax-bannaanida, waa wax la tixgeliyo marka la sameynayo taleefankooda ugu horreeya 5G.
Weli waxaa jira waddo dheer oo 5G ay u gaarsiin karto dhammaan adeegsadayaasha, laakiin waxa cad inay tahay inaan si tartiib tartiib ah u arki doonno isku xirnaanshahan qaab caadi ah oo jaangooyooyin ah oo adduunka oo dhan ah. Xilligan, waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano fikirkaaga: Batari badan ama miisaan yar?